Homo habilis: njirimara, mmalite na ọrụ evolushọn | Netwọk Mgbasa Ozi
Mmadu, dika umu ndi ozo, enwekwara umu nna ndi ozo. Otu n'ime ha bụ Homo habilis. A na-ahụta ya dị ka nna ochie kachasị ochie na mkpụrụ ndụ anyị wee chọpụta ya site na ụzọ ochie. Ọdịdị nke Homos habilis na-ewere ọnọdụ ihe dịka nde afọ abụọ na narị anọ gara aga. Ọ dị n'ụwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku afọ 2.4 wee daba na ụfọdụ ndị nna ochie ndị ọzọ dịka Homo erectus na Homo rudolfensis.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mbido, ọrụ evolushọn na ịmata nke Homo habilis.
2 Mmalite nke Homo habilis
3 Ọrụ Homo habilis na evolushọn
Ihe mbu bu nke achoputara site na nkpuru nna ochie a nke madu bu ihe emere n’Africa. N'ihi ikike nke ihe nlele a mepụtara iji nwee ike ịmegharị ihe bụ ihe kpatara o ji nweta aha a. O gosipụtara ọgụgụ isi dị elu karịa ndị nna ochie ndị ọzọ a maara dịka Australopithecus. Otutu mmepe mgbanwe nke umu a bu n'ihi na o malitere itinye anu n'ime nri ya. Ọtụtụ micronutrients dị na anụ nyere aka n'ịmepụta ikike nghọta ọhụrụ. Mụ nwoke buru ibu karịa ụmụ nwanyị ma nwee ụkwụ abụọ.
Ọ bụ ezie na ọ bụ akụkụ abụọ, ọ ka nwere otu usoro mmụta dị iche na nke mmadụ dị ugbu a. Ogwe aka ya toro ogologo ma rụkwara ọrụ dị ka nkwado maka ụfọdụ mmegharị na mberede. Ha nwere udi dika nke ugbua enwe. N’aka nke ọzọ, ha ka nwere mkpịsị aka nke na-enyere ha aka ịrị osisi n’ụzọ dị mfe karị. N'agbanyeghị ihe ị chere, vHa biri n'ìgwè dị iche iche ma nwee usoro nhazi nke ọma.
Mmalite nke Homo habilis
Aha Homo habilis sitere n'eziokwu nke foduru nke arịa ndị ejirila okwute mee site na ụdị ndị a. Ọ pụtara ihe dịka nde 2.6 afọ gara aga wee dịrị ndụ ruo ihe dịka 1.6 nde afọ gara aga. Speciesdị a na-ebi kemgbe Pleistocene na oge Gelasian na Calabrian. Oge gara aga nke ọ malitere na akụkụ a nke mmadụ bụ ihe kachasị na-egosi mbelata mmiri ozuzo. Nke a bụ unwu ala na enwere nsogbu zuru oke maka mmepe nke ahịhịa na ahịhịa.
N'adịghị ka ihe mere na Homo erectus, ụdị a ahapụghị kọntinent ahụ. Ihe foduru niile achọtarala n’Africa. Nke a na - eme ka mpaghara dum nke Tanzania bụrụ ebe ụmụ mmadụ bi. Na 1964, a malitere ichoputa ihe di iche iche nke puru iche na ihe ndi ozo nke okpukpu na ihe ndi ozo. Ọ bụ ebe a ka ha hụrụ nchọta ahụ. Edere ụdị a dika Homo habilis ma were ya dị ka ụdị ọhụrụ dị na mkpụrụ ndụ mmadụ.
Na nkesa ala ya, anyị na-ahụ kọntinenti Africa, ọ bụ ezie na enwere ụfọdụ usoro sayensị na-akwado echiche ndị ọzọ. Ma obu na hominid sitere na mpaghara Etiopia, Kenya, Tanzania na East Africa. N’agbanyeghi na enwere otutu ihe nchoputa na ihe omumu banyere ihe omimi, enweghi ihe akaebe na umu a gha akwaga na mpaghara ndi ozo.
Ọrụ Homo habilis na evolushọn
Speciesdị mmadụ a nwere nnukwu mkpa na mmalite. Ruo mgbe ahụ echere na usoro mgbanwe nke na-eduga mmadụ bụ ihe dị mfe. Echere na ọ bụ site Australopithecus, site na Homo erectus, na mgbe ahụ Neanderthals. Ọ bụ mgbe ahụ ka Homo sapiens yiri. Ihe a na-amabeghị ruo mgbe ahụ ma ọ bụrụ na e nwere ụdị etiti ọzọ n'etiti mmadụ ndị a. Naanị ihe achọpụtara bụ Hoss erectus nke a hụrụ na kọntinenti Eshia, ọ nweghịkwa ihe metụtara Africa.
Site na nchoputa emere na Tanzania, enwere ike ijuputa otutu oghere ndi di na ihe omuma banyere mmadu. Ndị ọrụ nyocha ahụ kwubiri na ihe foduru ahụrụ dị ka ụdị ọhụrụ nke ụdị genọs Homo. Ma ọ bụ na ndị a foduru zutere ihe niile dị mkpa maka ha ka ha bụrụ ụdị a. N'ime ihe ndị a chọrọ, anyị na-ahụ ọnọdụ kwụ ọtọ, ụkwụ na nka iji nwee ike ijikwa ụfọdụ ngwaọrụ. Ikike ndị a nile mere ka ha kwubie na ọ bụ nke ụdị ọhụrụ nke ụdị genus Homo. Ihe kachasị dị nso na ụdị anụ ndị ọzọ mechara bụrụ ike ya, nke pere mpe n'oge ahụ.
Esemokwu ndị dị adị na Australopithecus dị ole na ole. Nke a mere Homo habilis ka ọ bụrụ akwụkwọ ochie nke mmadụ ochie. Ruo oge na-adịbeghị anya, Homo habilis na erectus chere na ha sitere na ibe ha. Otú ọ dị, ụfọdụ nchọpụta ọgbara ọhụrụ e mere na 2007 jisiri ike gosipụta ụfọdụ obi abụọ banyere nke a. Ndị ọkachamara a kwuru na Homo habilis nwere ike ịdị ogologo ndụ karịa ka anyị siri chee. Ọ bụrụ na anyị emee mgbakọ na mwepụ, eziokwu a nwere ike ime n'oge ihe dị ka afọ 500.000 nke akụkọ ntolite abụọ ahụ gaara ebikọ ọnụ.
Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ nnukwu nchọpụta nke ndị sayensị. Enwere obi abụọ banyere njikọ dị n'etiti ụdị abụọ ahụ nke ekwenyeghị na erectus gbachitere habilis ka dị taa. Achọpụtaghị ibi ndụ ha, agbanyeghị na-egosipụtakarị na enwere ụdị mgba mgba ọbara na-enweghị ego. Ihe nsonaazụ mgba maka ihe onwunwe bụ Homo erectus dị ka onye mmeri. N'ihi nke a, Homo habilis na-apụ n'anya.
Anyị maara na n’etiti njirimara nke ntụnyere Homo habilis na Australopithecus anyị na-ahụ otu esi ebelata ọtụtụ ndị ahịa ya. Kwụ ndị ahụ dị ka nke dị ugbu a ma ha nwere ọga ụkwụ ọ fọrọ nke nta ka m biri. Banyere okpokoro isi, ọdịdị ahụ dị gburugburu karịa nke ndị bu ya ụzọ. Edere ihu ya site na prognathism na-erughị ka Australopithecus.
Ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na mmadụ dị ugbu a, anyị ga-ahụ na o nwechaghị nnukwu nha. Mụ nwoke ahụ nwere ike tụọ mita 1.4 ma tụọ ihe dị ka centimita 52. N'aka nke ọzọ, ụmụ nwanyị pere mpe karịa. Ha ruru otu mita n'ogologo na otu kilogram 34 na nkezi. Nke a gosipụtara ngosipụta mmekọahụ mara mma.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị kari ịmụtakwu banyere Homo habilis na ọrụ ya na mmalite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Homo habilis